♥ ♥ ♥ အောင်ခိုင်မိုး ♥ ♥ ♥: Windows_7_Logon_Background_Changer
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ် လေးကိုလာလည်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လိုအပ်သော အခက်အခဲများ၊ Software များ တောင်းဆိုချင်ပါက ( www.aungkaingmoe.blogspot.com@gmail.com ) ကို Mail ပို့ပြီးဖြစ်စေ၊ C-Box မှာဖြစ်စေ တောင်းယူနိုင်ပါသည်။ ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့်.....♥♥♥ အောင်ခိုင်မိုး ♥♥♥
ဒါလေးကတော့ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ Windows7ကို ဖွင့်ရင် Log In လုပ်တဲ့အခါ Background ကို ကိုယ်ထားချင်တဲ့ ပုံလေးထားတာပါ။ အထဲမှာ Setup ဖိုင်လေးလည်းပါပါတယ်။ လွယ်လွယ်သုံးချင်ရင် Foloder စစဖွင့်ချင်း မှာပါတဲ့ Application ဖိုင်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။ Setup File ကိုသုံးချင်ရင် Install ပြီးရင် Dasktop ပေါ်မှာဘာမှမပေါ်လာပါဘူး။ ထားချင်ရင် အရင်ဆုံး Control Panel ထဲဝင်ပါ။
ပြီးရင် Appearance and Personalization. ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ ဒါဆို Windows7Login Background Changer လေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါလေးကို Right Click ပြီး CreateaShortcut ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုအဆင်ပြေသွားပါပြီ။ လိုချင်သူများ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့နေရာကနေ Download ချသွားလိုက်ပါ။
Window79:29 PM
0 Responses to "Windows_7_Logon_Background_Changer"
“ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ THANKS ဆိုသော စကားတစ်ခွန်းသည် စာရေးသူကိုအားဖြစ်စေတာ အမှန်ပင်... ”
အသစ်တင်တိုင်း Mail သို့ပို့ပေးပါမည်။ Gmail လိပ်စာထားခဲ့ပါ။
အခု ONLINE မှာ... ?
Online casino chatbox fx trading Irish online casinos DATING SITES
ဒီ Blog လေးကိုညွှန်းချင်ရင်